Archive du 20170502
Haino aman-jery Tongasoa ny �Top Radio� 102.8 FM
Hisokatra amin�ny fomba ofisialy anio ny onjam-peo �TOP RADIO�, izay hita eo amin�ny mari-drefy FM 102.8. Foto-kevitra hijoroan�ny onjam-peo ny hoe �Sahy miteny ho an�i Gasikara�,
Fivorian�ny depiote Hitobaka indray ny vola be ?
Misokatra amin�ny fomba ofisialy anio talata 2 mey ny fivoriana ara-potoanan�ireo andrim-panjakana roa tonta, dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimierandoholona.
Ampanjaka eto Madagasikara � Tsaraina sy saziana ireo mpitondra meloka �
Manameloka ny tsy fanajana ny fahamarinana sy ny tany tan-dal�na ny Fiombonamben�ny Ampanjaka eto Madagasikara.
Famatsiam-bola 190 tapitrisa dolara Nankatoavin�ny Banky Iraisam-pirenena
Taorian�ny � R�union de printemps �, izay fivoriamben�ny Banky Iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena natao tany Washington Etazonia dia maro ireo fanapahan-kevitra noraisina.
Hipoaka ny sarom-bilany �
Manao ahoana ry Jean a ! Mangina sy tsy re feo intsony ianareo amin�ny raharaha Dinina be a ! Manaiky anareo mihitsy aloha ny rehetra fa toa nahomby ny paikadinareo amin�ny fampanginana iny resaka maloto iny.
Lal�na vaovaon�ny fiahiana ara-tsosialy Andrasana ny fampiharana azy
Nomarihina omaly alatsinainy 1 mey ny fetin�ny asa, anisany ny teto Madagasikara.
Fahatsiarovana ireo maherifo namoy ny ainy ho an�ny tanindrazana ho fitakiana ny fahaleovantenam-pirenena nogiazan�ny frantsay ny datin�ny 29 martsa 1947.
ATIALAN�ANDRIAMISERA Ripaka tanteraka ny 40 %
Miharipaka tsikelikely ny alan�Andriamisera any amin�ny Faritra Boeny amin�izao fotoana.
FILAN-DRA Efa tena ampy ho antsika eto Antananarivo
Tsy manana olana ny amin�ny tsy fahampian-dra intsony amin�izao fotoana ny eo anivon�ny Centre National de Transfusion Sanguine etsy amin�ny hopitaly HJRA.
Madagasikara Miasa tsizarizary ny 85%-n�ny mponina
1% mahery ny tahan�ny tsy fananana asa eto Madagasikara, araka ny voalazan�ny antontanisan�ny BIT (Bureau International du Travail) ny taona 2015.
Mpiasa miditra anaty sendika Zara raha mahatratra 9%
Zara raha mahatratra ny 9%-n�ny mpiasa Malagasy no mpikambana ao anaty sendika, raha ny antontan�isa navoakan�ny Birao Iraisam-pirenena momba ny asa na ny BIT.
FOIRE DE L�IMMOBILIER Nahasarika olona marobe tokoa, indrindra ireo mpividy tany
Fahombiazana tamin�ny ankapobeny no azon�ny In�idea Agency sy ny Gazet�Immo nandritra ilay �Foire de l�immobilier� andiany voalohany notanterahiny tetsy amin�ny lapan�ny tan�nan�Analakely ny faran�ny herinandro teo.
Fanafoanana CEPE Hampitombo isa ireo mpianatra handao sekoly
Mikorontana tanteraka ny sain�ny ray aman-drenin�ny mpianatra manoloana ny fanovana ny rafi-panabeazana eritreretin�ny mpitondra hatao eto Madagasikara.